Ihe ọghọm ụgbọ oloko na Kongo, opekata mpe ndị 50 nwụrụ - RayHaber
HomeỤWAAFRICA243 CongoIhe ọghọm ụgbọ oloko na Kongo, opekata mpe ndị 50 nwụrụ
13 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 243 Congo, AFRICA, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ 0
opekata mpe ụgbọ oloko na congo
Dabere na akụkọ mbụ, opekata mpe ndị 50 nwụrụ n'ihe ọghọm nke mere n'ụtụtụ mgbe ụgbọ oloko ahụ merụrụ na mpaghara Tanganyika na ndịda ndịda ọwụwa anyanwụ nke Democratic Republic of Congo.
Reuters hotara Minista na-ahụ maka ọrụ ndị mmadụ, Steve Mbikayi na-ekwu na ihe mberede ahụ mere n'obodo Mayibaridi n'elekere atọ nke ụtụtụ. Mbikayi kwuru na ọ dịkarịa ala, ndị nwụrụ 50 nwụrụ n'ihe ọghọm ahụ, ndị 23 merụrụ ahụ ma kpọga ha ụlọ ọgwụ.
Twitter m na-egosipụta obi ekele m maka ezinụlọ ndị nwụrụ n'ihe ọghọm a n'ihi gọọmentị, ana m achọkwa ka ọchịchọ anyị niile merie ndị merụrụ ahụ, Mazị Minister kwukwara na Twitter.
A naghị edozi okporo ụzọ ụgbọ oloko na Congo, a na-ewukwa ọtụtụ locomotives na 1960s. Maka nke a, ihe mberede na njem ụgbọ oloko na-akpata nnukwu ọnwụ.
Egburu onye ọzọ na ihe mberede okporo ụzọ na Kahramanmaraş 08 / 07 / 2014 Egburu onye ọzọ na ihe mberede ụgbọ okporo ígwè na Kahramanmaraş: 3 merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ ebe e gburu mmadụ n'ihi ụgbọ okporo ígwè na-agafe na ya. Ụgbọ okporo ígwè na-ebu ibu site na Adana ruo Malatya, ebe a na-agafe NNUMX Türkoğlu district Yeniköy ka ọ na-agafe agafe, Salih Doğramacı'nın nke ụgbọ ala kwụsịrị Besey Aksin (4), na-agwọ ọrịa na Necip Fazil City Hospital. E gburu Mustafa Aksın n'ihe mberede, Salih Doğramacı, Yusuf Baran Doğramacı, 70 afọ na Besey Aksın merụrụ ahụ.
Mmadụ nwụrụ n'ihi ihe mberede ọrụ na TÜLOMSAŞ 26 / 02 / 2013 Otu onye nwụrụ n'ihi ihe mberede ọrụ na TULOMSAŞ Eskişehir na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke wagon puller bụ nke merụrụ ahụ dị ukwuu site na mmetụta nke akụkụ ahụ gbajiri agbaji, nwụrụ anwụ. Dị ka ozi natara, Hoşnudiye nkeji iri na ise na Turkey Locomotive na Engine ụlọ ọrụ dị ka Ahmet nku Street (TÜLOMSAŞ) Saraçoğlu'nda ọrụ Hussein (53), kụrụ site akụkụ gbubiri n'oge n'ụgbọala puller. Saraçoğlu merụrụ ahụ, 112 ndị ọrụ mberede na-ahụ maka ndị ọrụ mberede wepụrụ site na Eskişehir Osmangazi University (ESOGU) Hospital Hospital, n'agbanyeghị ọnwụ nke ndụ ya nwụrụ. Isi: www.haberciniz.biz
Onye nwụrụ ndụ ụgbọ ala ya 23 / 08 / 2014 Otu onye nwụrụ ndụ na Rize Cable Car Waya: Rize'nin Çayeli district nke obodo nke Karaağaç ejikọrọ na eriri mmiri efu ndụ ndụ. N'ime ihe merenụ na Middle Neighborhood, na-agbada soro ezinụlọ ya na-arụ ọrụ na ogige tii bụ Ismail Gur (16), na tii na azụ na-achọ ịgafe n'okpuru ụgbọ okporo ígwè na ubi. Ọ chọrọ ibuli ụgbọ ala, nke a na-akpọ Sırma, site na ijide ya. Nwa na-enwe obi ọjọọ na-ezigara ezinụlọ ya site na Çayeli İshakoğlu State Hospital, n'agbanyeghị mmemme niile e mere ebe a, İsmail tụfuru ndụ ya n'ihi ụda eletrik.
Mmadụ nwụrụ ndụ n'okpuru ụgbọ oloko 18 / 06 / 2012 The omume, HalkalıỤgbọ okporo ígwè na-eduga na steeti Sirkeci site na 17.45 awa ruo ọdụ ụgbọ okporo ígwè Kucukcekmece mgbe igwe 1 mechara. Mgbe ihe mberede ahụ, onye ọrụ ụgbọ okporo ígwè ahụ kwụsịrị ụgbọ okporo ígwè ahụ, gbadata ma dọba ya n'okporo ụzọ ma hụ nwa okorobịa ahụ nwụrụ. Nlekọta ndị uweojii 155 na-akpọ ndị uweojii na-akpaghị aka site na ịkpọ usoro ahụ. Rịba ama ihe mere site na ndị uweojii na-ewere ihe nchebe gburugburu ahụ ahụ. Na njedebe nke nyocha ahụ, e kpebisiri ike na onye a na-amataghị na ọ bụ nwoke na 24 afọ. Mgbe ọrụ nke ndị uweojii si n'obodo Istanbul Metropolitan Municipality nwere olili ozu banyere İstanbul
Na Elvankent, Ankara, otu onye ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ 23 / 12 / 2012 Ahmet Taya (54), bụ onye si ahịa azụ ahịa na Elvankent ụgbọ okporo ígwè dị na Ankara, nwụrụ na ụgbọ okporo ígwè dị elu site na Eskişehir. Ndị bi na ndị agbata obi, naanị ebe nchebe dị n'ógbè ahụ na-agafe n'okporo ụzọ na-aga n'okporo ụzọ ahụ jupụtara na mmiri, ya mere, ndị na-eme njem ahụ nwere nsogbu, o kwuru. N'agbanyeghị oku ekwentị na-akpọ ASKY, onye kwuru na mmiri dị n'akụkụ ala nke ndị bi n'ógbè ahụ, ha gosipụtara mmeghachi omume ha na ihe mberede ahụ. Isi: HaberTurk
Egburu onye ọzọ na ihe mberede okporo ụzọ na Kahramanmaraş
Mmadụ nwụrụ n'ihi ihe mberede ọrụ na TÜLOMSAŞ
Onye nwụrụ ndụ ụgbọ ala ya
Mmadụ nwụrụ ndụ n'okpuru ụgbọ oloko
Na Elvankent, Ankara, otu onye ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ
Metrobus kụrụ onye tụfuru ndụ ya (Video)
1 gburu ụgbọ oloko na Maltepe district nke Istanbul
A gburu mmadụ n'okpuru tram na Konya
13 579 gburu na nrịgo gafere
Ndị 1 tụfuru ndụ ha na-agafe na Aydın